नयाँ शक्ति पार्टीका डा. बाबुराम भट्टराईले ‘क्रान्तिकारी’ नेता सत्तामा पुगेपछि भ्रष्ट भएको बताए::KhojOnline.com
फागुन, डडेल्धुरा । नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले ‘क्रान्तिकारी’ नेता सत्तामा पुगेपछि भ्रष्ट भएको बताएका छन् ।
जनसंवाद यात्राका क्रममा डडेल्धुरा सदरमुकाम आइपुगेका पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले क्रान्तिकारी नेताहरुले सत्तामा पुगेपछि आफ्नो निष्ठा, आर्दश भुलेर भ्रष्टाचार गरेको बताएका हुन । ‘हामी सबै पार्टीका साथीहरु क्रान्तिकारी हौं, सबै साथी जेल बस्नु भएको हो’ उनले भने ‘तर, सत्तामा पुगेपछि रेकर्ड राम्रो छैन । जानेर होस् वा नजानेर भ्रष्टाचार भयो ।’
२०४६/४७ मा कांग्रेस, ०५४/५५ मा तत्कालीन एमाले र २०६३/६४ पछि तत्कालीन माओवादी सत्तामा गएको स्मरण गदैए उनले भने, ‘सत्तामा पुगेपछि सबैले आफ्नो आदर्शलाई बिर्सिएका छन्, जसरी गुलियोमा डुबेको झिँगा उड्न सक्दैन, त्यसरी नै क्रान्तीकारी साथीहरु सत्ताको चास्नीमा डुबेर ठुला-ठुला भ्रष्टाचार प्रकरण भएको हामीले देखेका छौं ।’
‘हिजोका क्रान्तिकारी भनिने कम्युनिष्ट र लोकतन्त्रवादी भनिने कांग्रेसका साथीहरुले समेत पञ्चायत र राणाकालको जस्तै भ्रष्टाचारका काण्ड गरे । त्यतिबेला लुुकाएर हुन्थ्यो आजभोलि हाक्काहाक्की भ्रष्टाचार गरे, चाहे वाइडबडी काण्ड भन्नुस्, चाहे बुढीगण्डकी प्रकरण भन्नुस् ।’
राजश्वको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी पाएका व्यक्तिहरुले नै आफ्ना आसेपासेलाई मिलाएर खाएको उनको आरोप छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले दलीय भागवण्डाका कारण अख्तियार काम नलाग्ने भइसकेको बताए । ‘हाम्रा अनुसन्धान गर्ने संस्थाहरु कमजोर भए, पार्टीका मान्छेहरुले भागबन्डा गरेर आयुक्तहरु नियुक्त गर्छन्, अनि तिनले कसरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्लान् ? उनले प्रश्न गरेका छन् ।
सशक्त जनलोकपाल आवश्यकता भएको भट्टराईको तर्क छ ।
मङ्ल, फाल्गुन १४, २०७५ मा प्रकाशित
भाइले चलाएको पेस्तोलको गोली लागेर घाइते ४८ वर्षीय शेष फारुकको मृत्यु
३ जेठ, वीरगञ्ज । भाइले चलाएको पेस्तोलको गोली लागेर घाइते भएका जिराभवानी गाउँपालिकाका ४८ वर्षीय शेष फारुकको मृत्यु भएको छ । घरायसी विवाद हुँदा जिराभवानी-१ महादेवपट्टीको बलुवाका शेषलाई उनका कान्छा भाइ ३८ वर्षीय शेख सेराजुद्धिन पेस्तोलले हानेका थिए । दाहिने पाखुरा छेडेर छातीमुनी गोली लागेका शेषलाई...
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले आजबाट राष्ट्रिय जागरण अभियान सुरु गर्ने
वैशाख, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले आजबाट राष्ट्रिय जागरण अभियान सुरु गर्ने भएको छ । सरकारविरुद्ध खबरदारी र पार्टी सुदृढीकरणका लागि कांग्रेसले जागरण अभियान सुरु गर्न लागेको हो । कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सरकारले गरेका गलत काम–कारबाहीलाई जनतामाफ लैजान र पार्टी संगठनलाई थप सुदृढीकरण...
दुई सय इस्लामिक धर्मगुरुसहित छ सय विदेशीलाई देश निकाला गरे
वैशाख, काठमाडौं । इस्टर सन्डेको बेला भएका श्रृंखलाबद्ध विष्फोटपछि श्रीलंकाले २ सय इस्लामिक धर्मगुरुसहित ६ सय विदेशीलाई देश निकाला गरेको छ । गृहमन्त्री बी. अबयवर्दनाले विष्फोटपछि छानविनको क्रममा भिसा अवधि समाप्त भइसकेको र केहीको गतिविधि शंकास्पद पाइएकाले देश निकाला गरिएको बताएका छन् । तर, देश निकाला गरिएकाहरु कुन-कुन...
उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन ‘पासाङ बुधबारदेखि नयाँ सरकारी निवासमा सरे
वैशाख, काठमाडौं । उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन ‘पासाङ बुधबारदेखि नयाँ सरकारी निवासमा सरेका छन् । हाल बस्दै आएको गैह्रीधारास्थित सरकारी निवासबाट लैनचौरस्थित उपराष्ट्रपतिको भवन ग्रीनहाउसमा सरेका हुन् । उपराष्ट्रपति पुन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक मजदुर दिवसको अवसर पारेर नयाँ भवनमा सरेका उनको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । गत वर्ष...
मेलम्ची खानेपानी आयोजना द्रुत प्रक्रियाबाट (फास्ट ट्र्याक) बाट सम्पन्न गरिने
बैशाख १७ – मेलम्ची खानेपानी आयोजना द्रुत प्रक्रियाबाट (फास्ट ट्र्याक) बाट सम्पन्न गरिने भएको छ । मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको बोर्डले द्रुत प्रक्रियाबाट काम सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ । निर्णय खानेपानी मन्त्रालयले मन्त्री परिषद्मा पेस गरिसकेको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि द्रुतमार्गबाट आयोजना सम्पन्न गरिने...
लोकतन्त्रमा धेरै उपलब्धि भए पनि जनता निराश सन्दर्भ लोक तन्त्र दिवस
काठमाण्डौ – आज वैशाख ११ गते, लोकतन्त्र दिवस मनाइँदैछ । २०६२÷०६३ जनआन्दोलन सफल भई २०६३ वैशाख ११ गते लोकतन्त्र स्थापना भएको सम्झनामा आज विभिन्न कार्यक्रम हुँदैछ । २०६३ साल वैशाख ११ गते राती तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०५९ साल जेठ ८ गते विघटन भएको संसद् पुनःस्थापना...